के जाडो मौसमले तपाईंको मनस्थिती खराब गर्छ ? यस्तो छ मौसम र मुडमा सम्बन्ध
तपाईं कुनै निर्णयक मोडमा हुनुहुन्छ रु अर्थात यस्तो विन्दुमा हुनुहुन्छ, जहाँबाट तपाईंको जीवनले नब्बे डिग्रीमा कोल्टे फेर्दैछ रु विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, जागिर बदल्ने, नयाँ उद्यम गर्ने कुनैपनि ठूलो निर्णय लिनका लागि..
दोस्रो नेपाल आइडल रवि ओड बने , के के पाए पुरस्कार ?
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन-२ को विजेता रवि ओड बनेका छन् । रविले २२ लाख नगद। गाडी र गोल्डेन माइक पाएका छन् । आइडलको फ्रस्ट रनरअप बिक्रम बराल बने ।..
काठमाडौं । आफ्ना अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओको निम्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यसै साता वाशिङ्टन डीसी पुग्दा अमेरिकी सेनाले सन् २०१८ मा नेपाललाई अत्याधुनिक हतियारहरू बिक्री गर्न सफलता प्राप्त भएको विवरण..
तपाई आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न, यी चार सूत्र थाहा पाउनुहोस्
समयक्रमसँगै मानिसको जीवनमा विभिन्न परिवर्तनहरु आइरहन्छन् । तर, एकाएक ठूलो सकारात्मक परिवर्तन भने प्राय सम्भव हुँदैन । रातारात वा अचानक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नसकिने भएकाले हामीले विस्तारै(विस्तारै अटुट मेहनत..
नेपाल एयरलाइन्सको प्रवक्तामा क्याप्टेन विजय लामा नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को प्रवक्तामा क्याप्टेन विजय लामा नियुक्त भएका छन्। अभिनेता समेत रहेका लामालाई बुधवार निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले प्रवक्ता पदमा नियुक्त गरेको निगमका सह..
यस्ता कोड भाषा प्रयोग गरेर लुट्छन पकेटमारहरु, समातिए ७७ जना चोर
काठमाडौं । प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा चोरी र लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा ७७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महनगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उपत्यकामा पछिल्लो १५ दिनभित्र चोरी र लुटपाटमा संलग्न रहेको..
जाडो मौसम र डिप्रेसनबीच के सम्वन्ध होला र रु सायद तपाईं यस्तै सोच्नुहुन्छ । तर, गर्मी मौसमको तुलनामा जाडोमा धेरै मानिसहरु डिप्रेसनको शिकार हुने गरेको सत्य हो । के हो सिजनल..
चोरका लागि खुल्यो जागिर, तलब घन्टाको ६५ सय रुपैयाँ
एजेन्सी । बेलायतमा कपडाको शोरूम चलाउने एक महिलाले चोरहरूलाई जागिर दिने भएकी छन् । चोरी गर्ने व्यक्तिलाई घन्टाको ६५ सय रुपैयाँको हिसाबमा तलब दिइनेछ । कपडा पसल्नीले हालै बार्क डट्कममा यो..
यी महिला पाँच मिनेटका लागि मरेकी थिइन्, के भएको हो ?
काठमाडौं । ‘मेरा ओठ नीलो भयो, मैले सास फेर्नै सकिनँ, मेरो मुटुको ढुकढुकी रोकिएको थियो ।’ लरा डालेसियो आफ्नो कथा सुनाउँछिन् । भन्छिन्, ‘मेरो ज्यान बाँचेन भन्ने मलाई त्यतिखेर लाग्यो ।..
यस वर्षकै सबैभन्दा चिसो आज, काठमाडौंको तापक्रम २ डिग्रीमा झर्‍यो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जाडो ह्वात्तै बढेको छ । आज विहानको न्युनतम तापक्रम २.५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । यो रेकर्ड यस वर्षको हालसम्मकै सबैभन्दा कम हो । मौसमविद राजु प्रधानांगका..
महिलालाई किन बढी टाउको दुख्छ ?
पुरुषको तुलनामा महिलामा टाउको दुख्ने समस्या बढी हुने गरेको छ । महिलाले पाउने दोहोरो जिम्मेवारी (बच्चा जन्माउने काम)का कारण या हर्मोनका कारण पनि हुन सक्छ । तर, यसका पछि अन्य..
काठमाडौं । सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि हेलिकप्टर खरिद गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराएर नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिका लागि मात्रै प्रयोग..
रोबोटले कामदारको शरीरमा घुसायो तीखा रड !
एजेन्सी । आधुनिक युगमा मानिसको सहायता गर्नका लागि रोबोट अर्थात् यन्त्रमानवको प्रयोग धमाधम भइरहेको छ । तर रोबोटबाट खतरा पनि हुन्छ र त्यस्तो खतराको पछिल्लो उदाहरण चीनमा देखिएको छ । चीनको..
पोखराका सिडी विजय अधिकारी बने पहिलो भ्वाइस अफ नेपाल
काठमाडौं । पहिलो भ्वाइस अफ नेपालको उपाधि पोखराका सिडी विजय अधिकारीले जित्न सफल भएका छन्। कतारमा शुक्रबार राति भएको ग्रान्ड फिनालेमा अधिकारीले सबैभन्दा बढी भोट पाएर उपाधि जितेको घोषणा गरियो। गायन..
एक डलर घूस खाँदा तिर्नुपर्‍यो एक लाख डलर जरिवाना
एजेन्सी । सिंगापुरमा जम्मा एक डलर घूस लिएको पाइएपछि दुईजनामाथि एक लाख डलरको जरिवाना सजाय लगाइएको छ । चेन जिलियाङ र झाओ युकुन सिंगापुर सिटीको बन्दरगाहमा फोर्क लिफ्ट चालक थिए ।..
१०२ वर्षे महिलाले १४ हजार फिटको उचाईबाट हामफालेर बनाइन् विश्व रेकर्ड
एजेन्सी । विश्वमै सबैभन्दा बढी उमेरमा स्काइडाइविङ गरेर अष्ट्रेलियाकी १०२ वर्षे आइरिन ओ‘शियाले विश्व रेकर्ड राख्न सफल भएकी छिन् । उनले १४ हजार फिटमाथिबाट २२० प्रतिघण्टाको रफ्तारमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेकी..
आ.ब. २०७५–७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक पूरा पाठ सहित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५–७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नीतिले शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले..
यस्तो छ प्रदेश एकले ल्याउने बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकताहरु (पूर्ण पाठसहित)
विराटनगर । एक नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकताहरु प्रदेश संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदको..
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको पूर्णपाठसहित
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संघीय संसदको..
जाँदाजादै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनमा के भने जनतालाई ? (पूर्ण पाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौँथो कार्यकालबाट बिदा लिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ आदरणीय..
कुमार चौलागाई काठमाडौँ । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००६ देखि नेपालको खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो ।..
म जस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई लगानी, शिक्षा र रोजगारीका साथै तिनीहरूको नीतिगत अपेक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा फर्म, व्यक्तिगत र संस्थाहरूको विकल्पहरूका बारेमा सूचित गर्नसक्ने प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा कुनै निश्चित जवाफ छैन..
कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा संस्थाको चाहनाअनुसार लगानी, शिक्षा, रोजगारीका साथै जनअपेक्षाबमोजिमका कामकारबाही आगामी वर्षमा हुन सक्लान् या नसक्लान् भन्ने प्रश्न मजस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई बारम्बार सोधिन्छ । यो प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर..
सरकारले घोषणा गरेको ७४४ स्थानीय तह, राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पूर्ण विवरण
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्धारण आयोगले बनाएको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। संविधानअनुसार यो प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि..
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले के भने ? सम्बोधनको पूर्ण पाठसहित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २० वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको एक–एक मतको सुरक्षा गरिने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले देशभर १ करोड ४०..
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बन्यो तगारो, साना दल विपक्षमा स्वतन्त्र पक्षमा
नारायणप्रसाद न्यौपाने काठमाडौ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचमै राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने चरम विवाद कायम नै रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व..
​यसरी गर्नुहोस् ! धनधान्य देवी लक्ष्मीको पूजा र आरती
काठमाडौं । आज कात्तिक कृष्ण पक्ष औँशी अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन। धन र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। सफासुग्घर, लिपपोत नगरिएको र बत्ती नबालेको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने..
केही दिनअगाडिको भारत भ्रमणका क्रममा उज्यालो बत्तीमाझ प्रचण्डको नामले लोकप्रियता कमाएका नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हात मिलाए । ‘द हिमालय टाइम्स’ मा प्रकाशित तस्बिर हेर्दा उनी..
काठमाडौं । सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म यो सम्मानित संसदबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्ना धारणा र योजना राख्न उपस्थित भएको छु । सर्वप्रथम..
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जिबी नेपालले विहीबार अपरान्ह मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४..
Results 289: You are at page 8 of 10